Nezvedu - FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD
FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD yakagadzwa muFujian muna2009, inova chikamu chose chevaridzi che PEAKTOP Boka rakanyorwa muHong Kong (SEHK stock code: HK0925). PEAKTOP Boka rakagadzwa mu1991, kazhinji richishanda nezvipo uye nemabasa epamba.
Nekudaro izvozvi subsidiary -YUANHUA inonyanya kuita basa rekutsvaga uye kugadzira, kugadzira uye kutengesa kwesimba rinoshanda AC inopinza pombi, rezuva DC pombi yemvura, brushless DC inowira pombi nezvimwe. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya muzvitubu zvehunyanzvi, nzvimbo dzebindu, kudiridza kwegadheni, mota, otomatiki mvura inotenderera michina, zvigadzirwa zvezuva (shiri yekugezera tsime), aquarium hove matangi, tsoka tsoka yekugezesa, mhepo inotonhorera. Uyezve isu tinowedzera zvigadzirwa zvitsva senge drain pombi yekuwacha muchina uye RO pombi yekuchenesa mvura.
Kambani yedu yawana ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu, uye kunyatsotevedzera iri maneja system. Izvo zvigadzirwa zvakagamuchirwa neCCC, ETL, UL, CUL, CE / GS, ROHS, SAA nezvimwe zvinogona kusangana nezvinodiwa nenyika zhinji pasi rese. Isu tasimbisa kwenguva yakareba uye yakagadzikana hukama hwebhizinesi nemamwe makuru mabhizinesi epamba.
Tine mhando mbiri "PEAKTOP" uye "YUANHUA" pamapombi edu anonyudza. Nemakore anoda kusvika makumi maviri ezviitiko uye akanakisa mhando, isu tine mukurumbira wepamusoro muindastiri. Isu zvakare takatsanangurwa chigadzirwa mutengesi wepombi dzinonyudza dzemazhinji ekunze epamaketani emaketani. Nguva dzose nehunhu hwe "Hutanga kutanga, Vatengi kutanga", isu tiri kuwana inogara yakanaka mhinduro uye kiredhiti kune imwe nyika nemusika musika.
Kuti tirambe tichigadzira misika mitsva yepasi rose, isu takatora chikamu muCanton Fair gore rega uye dzimwe nguva muGlobal Source Hong Kong Electronics Show. Uyai nezvigadzirwa zvitsva zvekambani kutarisana-ne-kumeso kutaurirana nevatengi vatsva nevakuru kunze kwenyika, teerera kune vatengi 'mafungiro uye mazano, uye nekuenderera nekuvandudza zvigadzirwa. Kugutsikana kweMutengi ndicho chinangwa chebasa redu.
Uye zvakare, kuitira kuti vapfumise vashandi 'nguva yekusiya uye hutano, kambani yedu inopa zvipo zvebhavhadhe uye mapato akakodzera pazuva rekuzvarwa revashandi. Yuanhua Kambani inoenda kune dzimwe nzvimbo dzevashanyi kuti vafambe 2-3 nguva pagore. Pamberi peMutambo weChirimo kune madhiri makuru uye rotari gore rega rega, uye zvakare chiitiko chekutenda uye chegore negore kuratidza gore rose remari kuvashandi vekambani.
Nemakore anoda kusvika makumi maviri ezviitiko uye akanakisa mhando, isu tine mukurumbira wepamusoro muindastiri.
- Hunhu hwekutanga, Vatengi kutanga